Jose Mourinho Oo Magacaabay SADDEX Dhibaato Oo Haysta Manchester United Kaddib Dhaawaca Raphael Varane - Laacib
Jose Mourinho Oo Magacaabay SADDEX Dhibaato Oo Haysta Manchester United Kaddib Dhaawaca Raphael Varane
Manchester United ayaa xaqiijisay in Raphael Varane uu dhaawac kasoo gaadhay ciyaartii xulka qaranka Faransiisku koobka UEFA Nations League kaga qaaday waddanka Spain, taas oo laga saaray waxyar ka hor intii aan loo bixin waqtiga nasashada.
Varane ayaa sawirro laga qaaday waxa lagu ogaaday in dhaawaciisu uu qaadan doono muddo toddobaadyo ah, taas oo ka dhigan in uu seegi doono qaar ka mid ah kulamada adag ee Leicester City, Atalanta, Liverpool iyo Manchester City.
“Raphael Varane waxa uu dhaawac kasoo gaadhay muruqa lugta intii lagu jiray ciyaartii finalka UEFA Nations League, waxaanu waqti soo kabasho ku qaadanayaa kooxda. Waxa uu garoomada ka maqnaan doonaa muddo usbuucyo yar ah.” Ayay ManchesterUnited ku tidhi war-saxaafadeed ay soo saartay Salaasadii.
Dhaawaca Varane oo yimid xilli Manchester United uu ka maqan yahay Harry Maguire oo isaguna dhaawac ah ayaa waxay Ole Gunnar Solskjaer ku keenaysaa madax-xanuun iyo isbeddel qasab ah oo uu ku samayn doono khadkiisa difaac.
Si kastaba, Jose Mourinho oo hore usoo layliyey Manchester United ayaa waxa uu magacaabay saddex arrimood oo waaweyn oo dhibaatooyin ah oo haysta Manchester United, gaar ahaan khadkeeda dambe ee difaaca.
“Waxa uu Gary Neville sheegay dhamaantood waa sax, Lindelof aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay waxyaabaha qaarkood garoonka gudihiisa, laakiin waxa xerada ganaaxa dhexdeeda lagu garaaci karayaa qof-iyo-qof [one-on-one], kuma wanaagsana kubbadaha sare, laakiin Maguire ayaa leh soo jeedka iyo awood jidheed oo muhiim ah.” Ayuu yidhi Mourinho oo la hadlay Sky Sports.
Harry Maguire hadda wuu dhaawacan yahay, sidoo kalena waxa maqan Varane, waxaanay taasi ka dhigan tahay in Lindelof oo haysta caqabadihii uu sheegay Mourinho uu noqonayo difaaca dhexe, taas oo sii kordhin karta dhibaatadii marka horeba haysatay Red Devils.